ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा कम घातक छ, तर होसियार बनौंः टेकु अस्पताल निर्देशक डा. रावल :: डा. मनिषा रावल :: Setopati
आगामी एक महिना चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ
डा. मनिषा रावल
लगभग एक महिनाअगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणअनुसार माघको दोस्रो साता कोभिडबाट दैनिक १५ देखि २० हजार संक्रमित हुन्छन् भन्ने थियो।
अहिले समुदायमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। त्यसैले अबको एक महिना हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छजस्तो लाग्छ।
मध्य माघ भइसकेको र चिसो याम भएकाले रुघामर्कीको पनि मौसम छ। कोभिडको लक्षण रुघामर्कीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यसले गर्दा पनि एक महिना चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको हो।
यस वर्षको वैशाख मध्यदेखि जेठ मसान्तसम्म महामारीको कहालीलाग्दो रूप देखियो। अहिले तेस्रो लहर सामना गर्दा कोभिड भाइरसको स्वरूपमा केही परिवर्तन भएको छ।
अहिलेको ओमिक्रोनबाट डेल्टा भेरियन्टजस्तो जटिल संक्रमण देखिएको छैन। गत वर्ष यति नै संक्रमण देखिँदा अस्पताल भरिभराउ थिए। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले संक्रमितलाई भर्ना गर्न कम परेको छ। भर्ना भएकालाई पनि अधिकतम अक्सिजन प्रयोग आवश्यक परेको छैन।
एक महिनायता इमर्जेन्सीमा कोभिड संक्रमित २० देखि २५ जना छन्। तीमध्ये सबैलाई भर्नाको आवश्यकता परेको थिएन। यीमध्ये चारदेखि पाँच जनालाई मात्रै भर्ना गरेका थियौं। तर एक सातादेखि यो दर बढेको छ।
बुधबार तीन बजेसम्मको तथ्यांक अनुसार १९ जना भर्ना भएका छन्। आठ जनालाई आइसियु र ११ जनालाई एचडीयुमा राखिएको छ। ६५ देखि ८० वर्षसम्मका बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं। एक जना सय वर्षका बिरामीको समेत उपचार भइरहेको छ। त्यसमध्ये कतिले खोप नलगाएका र कतिले एकपटक मात्रै लगाएका छन्।
वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगी, खोप नलगाएकाहरूले अझै सचेतता अपनाउन जरूरी छ। अहिले एक जनाले दस जनासम्मलाई संक्रमण फैलाउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्छ। खोप नलगाएकाले खोप लगाउनुपर्छ। जेष्ठ नागरिक अनि दीर्घ रोगीको धेरै ख्याल गर्न जरूरी छ।
आगामी दिनमा यो भेरियन्टले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुराले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। गत सातादेखि तुलनात्मक रूपमा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या केही बढेको छ। तीमध्ये अक्सिजन आवश्यक पर्ने पनि केही बढेका छन्।
त्यसैले ओमिक्रोन कम हानिकारक छ भन्न अहिले नै हतार नगरौं भन्ने मेरो बुझाइ छ।
(कोभिडको तेस्रो लहर र यसको संक्रमणदर अनि बिरामीको अवस्थाबारे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलसँग सेतोपाटीले गरेको भिडिओ कुराकानी।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८, ०८:१५:००